Kiniiniyada Casaanka ee leh Cyanide, qaybtii 4aad iyo tii u dambaysay: Feejignaan xanaaq iyo xanaaq badan | Laga soo bilaabo Linux
Budhcad-badeedda feejignaanta aniga iyo FSF libretardos, qorigan dabka dheere.
Sharaxaad hore: Tim Berners-Lee wuxuu siiyay iftiinka cagaaran in lagu daro Kordhinta Warbaahinta oo La Qariyay ku jira HTML5. Kordhinta Caanka ah ee loo yaqaan 'Encrypted Media Extensions' waa barxad u oggolaan doonta waxyaabaha ku jira dijital ah ee lagu ilaaliyo in lagu soo bandhigo biraawsarka, iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo waxyaabo ay ka mid yihiin Flash ama Silverlight
Farsamo ahaan maahan DRM.Ee peeeeeeeeeeeeeeeeero waxay siineysaa albaab furan furitaankiisa. Sababtaas awgeed Aasaaska Xuduudaha Elektaroonigga ah (iyo ficil ahaan mid kasta isticmaale softiweer bilaash ah ama u ololeeye) ayaa cirka ka qaylinaysa, halka hees uu qaado Kuwii heesaayay (meeye Tim waa Juan Carlos oo ku xusan heesta).
Aabaha World Wide Web bixi ugu yaraan hal sharrax.
Isticmaalayaasha kala duwan waxay leeyihiin dookhyo kala duwan. Marka ugu horeysa ee isticmaaleha la dhigo ma naga caawinayso inaan qancino codsiyada suurtagalka ah ee aan is waafaqi karin ee isticmaalayaasha: Isticmaalayaasha qaar ayaa doonaya ku daaww filimada miisaaniyada badan guriga, isticmaalayaasha qaar ayaa raba ku tijaabi koodhka. Xalka ugu fiican wuxuu noqon doonaa midka qancin kara qof walba, welina waan raadineynaa. Haddii aynaan helin, waxaan raadin doonnaa xalalka waxyeellada ugu yar u geysta kuwaan iyo codsiyada kale ee codadka leh ee ka imanaya isticmaaleyaasha, qorayaasha, hirgeliyeyaasha, iyo kuwa kale ee nidaamka bey'adda.
Waxaan idin xusuusinayaa in 30% taraafikada internetka ee Mareykanka waxay ka timid Netflix. Netflix-na waxay neceb tahay Silverlight iyo Flash sida aan annaga oo kale u neceb nahay.
Waxay sidoo kale sheegeysaa in W3C aysan qeexi karin waxa daalacayaasha ama bixiyeyaasha waxyaabaha ay sameyn karaan, wadahadalkuna waa furan yahay. Jawaabtu …… .. wali waa isku mid sidii aan horey u sheegay (Ma ahan cunug, kaliya Juan Carlos, hal khiyaano yar).
Runtuna waxay tahay inaad yeelato ukunta titanium-ka si aad u qorto wax aan ku habboonayn aragtidaas. Kaalay, taasi xitaa qaar baa iska leh dhis khilaafka weyn ee HTML oo raac tilmaamaha kale ee kala duwan, sida WAA MAXAY (Horaanba kusiiyay badal hadiiba aad rabto hahaha).
Hagaag, waa kuwan labadaydii santi: Xusuusnow markii Mozilla ay ku dhawaaqday taageerada h264 sanad iyo badh ka hor? Ayuu yiri Brendan Eich:
H.264 waxaa gabi ahaanba looga baahan yahay inay ku tartamaan mobilada. Uma maleynayo inaan diidi karno H.264 waxyaabaha ku jira Firefox ee loogu talagalay Android ama B2G (Firefox OS) oo aan ka badbaadi karno socdaalka moobiilka. Guul darada waa khibrad qadhaadh. Ma macaani doono kaniinigan. Laakiin waa inaan liqnaa haddii aan dooneyno inaan ku guuleysano dadaalladayada moobiilka. Ku guuldareysiga taleefanka gacanta ayaa aad ugu nugul in lagu aaso Mozilla burburka iyo qummanaanta. Marka aad ayaan u jeclahay soo jeedinta Andrea.
Halkaas ayaad tagtaa. Kiniin casaan ah oo leh syanide. Waxaan kugula talinayaa booqashada cayayaanka ay dhawaan fureen inaad codsato in Firefox sinnaba ugu darin taageerada EME. Waxay yeelan doontaa dhammaad isku mid ah. Internet Explorer wuxuu ka kici doonaa dambaska oo wuxuu la socon doonaa Chrome (Chromium waa la tuurayaa), waxay xukumi doonaan suuqa biraawsarka.
Adiguna horumariyaha webka if .haddii aadan waligaa DRM ku isticmaalin boggagaaga, ma bilaabi doontid hada. Horaanba kusiinay badal hadaad rabto inaad halkaas raacdo. Mid kale wuxuu noqon karaa in la sugo inta ay ka imaaneyso mustaqbalka uu arkay Brendan Eich (koodhadh ka sarreeya h264, sumadeyn wanaagsan, iwm).
Tanina waxay noqoneysaa qaybta ugu dambeysa ee sagaalka. Waxaan ka fekeray ka hadalka shabakadaha bulshada laakiin waxay iga dhigeysaa mid qiiro badan inaan ka hadlo arimahan mana kufilan inaan halkaan ka hadlo. Sidoo kale kamaan hadli karin wax ku saabsan sirta adag ee adag, adeegyo kale oo emayl ah, VPNyo iyo waxyaabo kale maxaa yeelay xitaa ma aanan tijaabin. Ilaa laga gaadho op-ed xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Kiniiniyada Casaanka ee leh Cyanide, qaybtii 4aad iyo tii u dambaysay: Cadho iyo xanaaq la'aan
Waxaan u maleynayaa in, illaa iyo inta aysan jirin drm html5 si uun, waxyaabaha sida Netflix-ka ah waligood laguma qaybin doono, sidaa darteed waa la hirgelinayaa, ama waa inay is casishaa si loo rakibo flash ama lightlight. Ama si toos ah uguma raaxaysan nuxurkaas.
Ama waxaa laga yaabaa inaad u isticmaasho bitcoins adeegga BitTorrent.
Ikhtiyaarka kale ayaa ah in uusan ka marin biraawsarka waxyaabaha ay ka kooban yihiin la soo bandhigo.
In Netflix iyo wixii la mid ah ay sameystaan ​​barnaamij u gaar ah (a netflix player, kaas oo la rakibo marka qandaraas la qaadanayo oo aan isticmaalin flash ama silverlight) oo ay ku qaybinayaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin, ayaa ahayd ikhtiyaar la sheegay laakiin si xiisa leh loo tuuray hadalada rasmiga ah iyo kuwa warbaahinta.
Xaqiiqdii maxaa yeelay waxa la raadinayo ayaa ka weyn xakamaynta biraawsaradayada.
Sababtoo ah waxay lamid tahay isticmaalka Flash ama Silverlight, marka lagu daro xaqiiqda ah in waxa la raadinayo ay tahay in laga hortago fiidiyowyada laga ilaaliyo DRM ee lagu soo dejinayo diskiga adoo adeegsanaya xusuusta RAM.
Sidee ula mid yahay tooshka?
Spotify ma la mid yahay flash?
Ka soo deji video fiidiyaha? WTF!?
Sidee iyo sidee qof u isku dayi doonaa inuu ka soo dejiyo fiidiyowyada RAM?
Waxaan dhahay kubad kasta.
Halkan waxaa ku yaal sharaxaad ku saabsan sababta ay Netflix ugu sharraxayso html5
Waa hagaag, in la yiraahdo kubbadaha, waxaa fiican inaadan waxba sheegin ...
Waad kala jeexi kartaa dhibic dhibic waxay ku sheegayaan shabakada netflix.
2 ka mid ah 3da faallooyin ee ay ka jawaabeen durba sifiican ayey u shaqeeyeen.
Marka waxaan ka fiicnaan lahaa inaan soo koobo wixii aysan kuu sheegin.
-Warbixin laga soo qaaday seddex sano ka hor, halkaasoo ay diiradda ku saareen barnaamij (ps3) kaas oo bilo yar gudahood ka dhacay.
Dhamaan faa'iidooyinka ay sheegaan waxaa lagu gaari karaa ciyaaryahankaaga sidoo kale faa'iido darrooyinka isticmaalka biraawsarka waa laga fogaadaa.
Ugu dambeyntiina ... kuwa akhrin kara inta udhaxeysa khadadka.
“Waxaan tijaabineynaa fikrad kasta oo cusub, si aan u cabbiri karno saameynta aan ku leenahay macaamiisheenna. Miyay helayaan waxyaabo badan oo ay daawadaan? Miyay ku raaxaystaan ​​bandhigyada TV-yada iyo filimada ay sifiican u arkayaan? «
Aan aragno ... ciyaaryahanka kuma haboona maxaa yeelay dhamaanteen waan ognahay hadii ay mid sameeyaan, hubaal inaysan u sameyn laheyn Linux ... aad ayey ugafiican tahay hadii ay lashaqeyso sheyga dmm ee ku habboon dhamaan daalacayaasha waana taas.
Adiga oo iska dhigaya kubbadda madadaalada ah, aan xusuusano isla tusaalahan aan siiyay Diazepam.
Spotify ayaa macmiil u ah PC, MAC, GNU / Linux, iPod / iPad, Blackberrie… ..
Haddii Netflix uusan rabin inuu u sii daayo ciyaartoygeeda GNU / Linux, kaaga sii daran iyaga, P2P iyo soo degsashada tooska ah ayaa wali ah amarka maalinta.
Waxaan sidoo kale ku raacsanahay taas, haddii Netflix ay rabto inay ilaaliso waxyaabaha ay ka kooban tahay, waa inay horumariso boggeeda biraawsarka u gaarka ah, iyo sidoo kale Netflix Player.
Taasi xitaa waxay u oggolaan laheyd marin ka helitaanka Linux, maaddaama aad addon u tahay Firefox wax dhibaato ah ma jiri doonaan.
Laakiin Netflix waxay la timid fikrad nacas ah oo ah shitting a standard standard sida HTML5 si kor loogu qaado DRM
Taasi waa waxa aan iri, laakiin nasiib daro waxay la yimaadeen fikirkaas waalan ee ah in la jinniyo halbeeg wanaagsan oo ay tahay inuu xor ahaado.
Waxaa jira waqtiyo uusan software-ka bilaashka ahi ka adkaan karin barnaamijyada lahaanshaha, haddii uusan la qabsanna, ma guuleysan doono.
Halkaas waxaad ku haysataa tusaale ahaan Linus Torvalds oo ku daraya bini'aadannada caanka ah ee caanka ku ah Linux kernel, haddii uusan sidaas yeelin, GNU / Linux weli waxay ahaan lahayd nidaam aan is-qaban karin oo leh qalab kala duwan oo ay sii wadi lahayd in dad badani diidaan sababahan awgood.
Waxyaabaha waxaad ka eegaysaa dhinaca muraayadda.
Soo-saareyaashu waa waxa ay tahay inay la-qabsadaan oo ay soo saaraan waxa isticmaalayaasha / horumariyeyaashu dalbanayaan, maaha habka kale.
Maxaa ku dhacay kaararka sawirada?
Isticmaalayaashu ma aqbalin wixii loo soo bandhigay, waxay doorbideen inay iibsadaan sawirada Intel, waxay isticmaaleen khamri ama qayb dheeraad ah si ay u ciyaaraan, ugu dambayntiina bixiyeyaashu waxay gacmahooda laalaabayaan oo ay siinayaan darawalo ka fiican (xitaa haddii ay leeyihiin lahaansho) ama sii deynta dukumiintiyo / qeexitaan yar yar.
Markaa haddaan bilaabo inaan abuuro kernel ka soo xoqida kaligey, markaa soo saarayaasha waa inay ila qabsadaan sababtoo ah hebel iyo hebel ayaa la yimid abuurista kernel madaxbannaan oo xitaa ma qorsheynayo inuu ka ganacsado
Maxay tahay hab wax looga qaadayo macnaha guud.
Iyadoo aan loo abuurin dhacdooyin macquul ah, waxaan ku siin karaa tusaalooyin sida soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaashu ula qabsadaan baahida suuqa ee dunida dhabta ah.
1. Qaab dhismeedka x64 wuxuu jiray waqti dheer laakiin ilaa iyo dhawaa dadku waxay awoodeen inay qabsadaan kombuyuutaro ka badan 3 GB oo RAM ah, soosaarayaashu waa inay ilaaliyaan tilmaamaha 32 bit ee processor-kooda, xitaa kuwa sameeya nidaamyada hawlgalka iyo barnaamijyada waxay sii abuurayaan noocyo 32 iyo 64 ah.
2. Nokia waxay kubilaabantay iibinta waraaqaha iyo alwaaxa alwaaxa leh, macaamiishooduna waxay uqabeen baahiyo cusub, wax walbana cadaabta ayey ugu celceliyaan marar badan, hada waxay iibisaa taleefannada gacanta.
Adeegga iyo bixiyeyaasha waxsoosaarku waxay la qabsadaan si ay ula kulmaan baahiyaha macaamiishooda, maaha dhanka kale, dhaqaalaha aasaasiga ah.
Xitaa tusaalahaaga macquulka ah, haddii aad ahaan laheyd macaamiisha kaliya ee soo saaraha, haa, wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu adiga kula qabsado, maxaa yeelay haddii kale, qof kale ayaa sameyn doona oo ku guuleysan doona iibka.
Dhibaatada ugu weyni waa sida loo qaybiyo DRM. Waxaan jeclaan lahaa Netflix inay soo jeediso in la siiyo DRM-ka sida loo yaqaan 'Cuevana-plugins' (hadda, bartaasi horey ayey cadaab u gashay).
Waxaan rajeynayaa inaysan ku dhicin DRM, maadaama FSF iyo EFF ay bartilmaameedsanayaan si ay u dhibaateeyaan.
"Plugin" ee Cuevana waxay ahayd khayaano.
Hagaag, waad ku mahadsantahay wanaag inuu isticmaalay TPB oo uusan isticmaalin Cuevana, laakiin ugu yaraan, Netflix, waa inay ku ridaan DRM-kooda qaab plugins.
Nasiib darrose, mararka qaarkood allabaryo waaweyn waa in la sameeyaa si loo hubiyo kobaca Linux. Waxaa laga yaabaa in HTML 5 pre-DRM ay tahay qiimaha lagu bixinayo… .s
Xaqiiqdii qaar badani igama raaci doonaan, laakiin haddii ay tahay inaan kala doorto DRM-ka HTML5, iyo Flash ama Silverlight, waxaan doortaa DRM. Flash iyo Silverlight ayaa xitaa ka sii khaldan iskuday kasta oo lagu hirgalinayo DRM.
Jawaab si winstonsmith
Sameynta maraq dufanka leh ama u dhiibashada cidda lacag ama saameyn ku leh waxay ahayd maraq maalin kasta leh horumarinta barnaamijyada iyo barnaamijyada bilaashka ah: waxay ku dhacday Microsoft, waxay ku dhacdaa Google haddana waxay ku dhacdaa Netflix ... Bayaanka kaliya ee laga yaabo Way fiicnaan laheyd in la sameeyo waa xitaa Linux, bani'aadamnimadu waa aqlabiyadda nacasyada waalan oo kaliya doonaya inay fiidkii ku arkaan ama ku raaxaystaan ​​kombuyutarkooda, taleefannada, kiniiniyada ama "smart" TV-yada.
Qorfe 2.0: Ku rakibida ArchLinux + Dib u eegis
Xafiiska Kingsoft, waa hab lagu soo jiito isticmaaleyaasha cusub